नेपाल आज | पार्टीको कार्यक्रममा राष्ट्रको झन्डा बोकेर केपी ओलीले के गर्न खोजेका हुन् ? (भिडियोसहित)
पार्टीको कार्यक्रममा राष्ट्रको झन्डा बोकेर केपी ओलीले के गर्न खोजेका हुन् ? (भिडियोसहित)
बिहिबार, २६ फागुन २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
फागुन २६ । नेकपा एमालेका कहिलेकाहीँ उठाउने विषयहरु बडा उत्ताउला हुन्छन् । जस्तो, पार्टीको कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा उठाउने कुरा सबै नेपाली जनतालाई सह्य हुने कुरा भएन । दोस्रो कुरा, मधेसमा गएर कार्यक्रम गरेर राष्ट्रवाद जोगिने होइन । यसको अर्थ मधेसका जनताहरु कोही राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने अर्थ जान्छ । त्यसले गर्दा मधेसी जनताले हिनतबोध महशुस गर्छन् । एमालेले त्यसो गर्नु उचित हुने थिएन । राष्ट्रवाद भनेको नेपालका सम्पूर्ण जनजाती र जनता मिलेर बस्ने वातावरण बनाउनु ।
यहाँ त पहाडका केही मनिसहरुले जे बोल्यो त्यही नै राष्ट्रवाद भएको ठान्छन् । पहाडीयाको जे रहनसहन छ त्यही राष्ट्रवाद हो भन्ने चलन छ । राष्ट्रवाद नेपाललाई अहिले चाहिएको चिज होइन । नेपाललाई अहिले चाहिएको चिज भनेको देशभक्ति हो । राष्ट्रवाद भनेको अरुको देश भन्दा आफू उन्नत हुँ भनेर देखाउने तरिका हो तर देशभक्ति भनेको अरुको देशसँग समान हुनुपर्छ भन्ने र देश जोगउनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रवाद र देशभक्तिको कुराा धेरैले नबुझेर यो समस्या भइरहेको छ ।
मोर्चाको आलोचना गर्दा मधेसीलाई हुन्छ ?
केपी ओलीलाई मधेसका उपेन्द्र यदव राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरु नै मधेसका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता हुन् भन्ने लागेको छ । त्यहाँ मधेसमा अन्य थुप्रै जनता, समाजसेवी र कार्यकर्ता छन् । उनीहरु सबै राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको कुरामा हिँडेका छैनन् । कहिलेकाहीँ बाबुराम भट्टराई पनि मधेस भनेको उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोमात्र हो भन्ने ठान्छन् । फरक प्रसंगले केपी ओलीको पनि दृष्टिकोण त्यही देखिन्छ । राजेन्द्र महतोहरुको मधेसमा त्यति धेरै लोप्रियता भएको जस्तो मलाई लग्दैन ।
त्यसो हुन्थ्यो भने नाकाबन्दीको समयमा उनीहरुले बोर्डरमा गएर आन्दोलन गर्दा पनि किन जनताको सहभागी थिएन ? आन्दोलन विफल भएरै उनीहरु काठमाडौंम बार्गेनिङ गर्न र सत्ता परिवर्तनको खेल खेल्न आए । त्यस्तो अन्तिम चरणको आान्दोलन विफल भएको देख्दादेख्दै पनि फेरि उनीहरुसँग सबै कुरा छ भन्ने सोच्नु मूर्खता हो ।
आफ्नै बलले मधेसमा राजनीति
मधेसी मोर्चाको साथ नभएपनि त्यहाँका जनतालाई संगठित गरेर र जनतालाई बुझाएर विभिन्न ठूला पार्टीले शालीनतापूर्वक आफ्नो अभियान गर्ने हो भने यो मधेसी मोर्चाको अहिलेको बालहठलई न्यूनिककरण गर्न सकिन्छ ।
देश टुक्रिने स्पष्ट आधार
मधेसी मोर्चाको जुन अहिलेको शक्ति छ, उसले जति प्रयत्न गरेपनि देश टुक्राउने अवस्थामा उनीहरु लैजान सक्दैनन् । मधेस जनताको धारणा पनि देशलाई टुक्राउने दिशातर्फ छैन । उनीहरुका अफ्नै राष्ट्रवादी धारणा छन् । मधेसबाट आएका गोपाल वंशीहरुले सबैभन्दा पहिले नेपाल राज्यको स्थापना गरेका हुन् । केही मानिसहरुले आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थको लगि जुन यो वितण्ड गरिरहेका छन् । यो एकदिन मधेसवादी जनताले अवस्य बुझ्नेछन् । यसलाई राजनीतिक पार्टीमा गएर गलत काम गर्नुहुन्न । एमलेले यस्तो गर्न खोजेको देखिन्छ । अभियनको शिलशिलामा मधेसी मोर्चाका कार्यर्तासँग झडप गर्न खोजेको देखिन्छ । यो निसन्देह अहिलेको राजनीतिक माग होइन । एमालेले आाफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि मधेसमा मेची महाकाली अभियाानबाट झगडा गर्न खोजेको देखिन्छ । यसो गर्न हुँदैनथ्यो ।
जुन तरिका उहाँहरुले अपनाउनुभएको छ त्यो भएन । राजेन्द्र महतोले मधेसलाई एमाले मूक्त बनाउने कुरा गर्दै आएका छन् । न यो उनले गर्नसक्ने कुर हो । एमालेले पनि मधेसी मोर्चालाई हामी देखाउँछौ भन्दै जाने कुरा ठिक होइन ।
तराइमा एमाले कमजोर भएर आफूलाई स्थापित गर्न गएको भएपनि जुन तरिका उनीहरुले अपनाए त्यो ठिक थिएन । जुन लाठी जुलुस एमालेले गर्यो यो झडप गर्न तयार भएको देखियो । एमालेजस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी जनतासँग गएर लाठी जुलुस गर्न सुहाएन ।
(नयाँ शक्तिका नेता भट्टराइसँगको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश)
baburam bhattarai Madeshi Morcha Naya Shakti Nepal Nirmal Bhattarai
१२ वर्षपछि शेखरले फर्काए रंगकर्मको खोला (भिडियोसहित )
मानसिक रोगी दैनिक बढेका छन् : मनोविद् ढकाल
शनिबार, ०७ भदौ २०७६
आत्महत्या दुरुत्साहनमा एकै वर्षमा १३२ जना हिरासतमाः सेलेब्रिटीको पक्षमा हजारौँको जुलुस, निमुखाको लागि को बोलोस्?
दशैंमा खसीबोकाको मूल्य बढ्ने
स्थायी भएको महिनौंसम्म शिक्षकले पाएनन् नियुक्ति
रविप्रति भरोसाको अर्थ